Joornaalada - Bogga 3 - Geofumadas
Kani waa magaca joornaal dijitaal ah oo ay daabaceen shirkadaha matala gobollada Yurub ee Sokkia iyo Topcom, oo xaruntoodu tahay Nederland. Waxaa lagu tifaftiray luqadaha Nederlandka iyo Ingriiska hal mar, halkudheggiisuna yahay "Magazine loogu talagalay xirfadleyaasha meelaynta", nuxurkeedu wuxuu ka gudbaa buug-yaraha fudud ee alaabooyinka sahaminta lagu sameeyo ...
120 sano oo juqraafi ah
Dhowr sano ka hor, saaxiibkay oo u guuraya waddankiisa wuxuu i siiyay aruurintiisa joornaalka National Geographics, taas oo inkasta oo wax walba iyo aboorku ay hadda qaataan qayb wanaagsan oo ka mid ah buug-gacmeedkayga, markaa markii nooca dijitaalka ah lagu dhawaaqay waddo adag 160 GB Waxaan u helay maaniyadaas inaan ...
majallado egeomates My
1 majaladda: 3 sawir
Khariidada hijrada, sida ku cad baafinta DNA. Hoos waxaa ku yaal shaxanka taariikhda waqtiga iyo kororka heerkulka adduunka. 5 milyan oo sano oo kaamil ah geesaha ayaan dhadhamin. Xayeysiinta laakiin daaweyn dhab ah. Shimbiraha buurta dusheeda, waxay umuuqataa been. Majaladda: New Zeland Geographyc, se…
Marka la eego qalabka sahaminta, waa wax aad u soo noqnoqda in la isbarbardhigo hal nooc iyo mid kale, ha ahaato isku nooc ama tartan. Shirkad kastaa waxay ka kooban tahay faahfaahinta alaabteeda, laakiin samaynta miisaska isbarbardhiga waa hawl dhib badan. Tan ku saabsan, majaladda bilowga majaladda, oo ku takhasustay ...
Tani waa magaca wareysiga uu Eric Van Rees la yeeshay ragga muhiimka ah ee seddex shirkadood oo heer sare ah teknoolojiyada geoinformatics: Jack Dangermond, Madaxweynaha ESRI Richard Zambuni, Agaasimaha Khadka Geospatial ee Bentley Ton de Vries, Fulinta Bentley ee Diiwaanka Dhulka iyo Khadadka Horumarinta Dhulka Halsey Wise, Madaxweynaha…
Marka laga reebo joornaalka maalmo ka hor ay daabacday Geoinformatics, waxaa jira mowduucyo kale oo bishan lagu daabacay bartooda oo mudan in lala wadaago. In kasta oo xayeysiisyadan qaarkood u muuqdaan kuwo la kafaala qaaday, haddana waxay wax ku darayaan horumarka tikniyoolajiyadda taasna waxay dejineysaa codka waxa ...
Geospatial - GIS, Google Earth / Maps, tabo cusub, dalwaddii Earth
Kuwa ugu wanaagsan ee 4tas. Jornadas gvSIG ...
Qaar badan oo ka mid ahi waxay isku raacsan yihiin in waxyaabihii ugu fiicnaa ee la helay maalmihii la soo dhaafay ay ahayd joornaalka tilmaamaya dhacdada, taas oo metelaysa shaqo weyn oo aan ahayn oo keliya xagga content laakiin sidoo kale dhadhanka garaafka. Kuwa ku helay qaab daabacan, waxay hubaal u tahay shey qiimo badan oo uruuriya sida kuwa majaajillada ah ee ...
Daabacaadda bishaan ee 'Geoinformatics' ayaa horeyba u soo baxday, taas oo dusha sare ka muuqata sawir dayax gacmeedka Digital Globe ee koonfurta Iiraan oo hordhac u ah maqaalka loogu talagalay adeegyada shirkadda Jarmalka ee GeoServe. Intooda badani waxay siineysaa sii socoshada mowduucyada horey loo taabtay waana ku faraxsanahay inay aad u cadahay ...
Laga soo bilaabo nooca Geoinformatics ee bisha Maarso, halkan waxaa ku yaal dib-u-eegis kooban oo ku saabsan sawirka shirkadda ee shirkadaha waaweyn ee ka muuqda joornaalka. Inta badan xayeysiiska si aad u wanaagsan ayaa loo shaqeeyay. Leica Waxaan aaminsanahay hal-abuurnimada Trimble Ku xirnaanshaha adduunka fursadaha Sokkia Precision ayaa farqiga u leh Magellan ProMark 500…
Su’aashu si fudud bay doqon u tahay, oo hadday ahaan lahayd hadal waa ka sii badnaan lahayd. Laakiin tani waa dhiirranaan buug aan maanta ka iibsaday dukaanka buugaagta, oo uu qoray weriye la yiraahdo Mike Wallace oo ah, halkii aad noo geyn lahayd hadal waqti leh, wuxuu nagu casuumayaa inaan ka fikirno waxa dhici kara 50 ...
Barnaamijka aad jeceshahay waa inuu dhinto
Bishaan majaladda PC Magazine waxaa lagu soo raray weedho leh heerkan yaabka leh ee ka dhanka ah caannimada weyn ee Microsoft iyo gaar ahaan nidaamka hawlgalka Windows. Waxaan rabaa inaan u qoondeeyo qoraalkan Nadia Molina, oo ka tagaysa majaladda PC Magazine, waxaan u xiisi doonnaa barkeed iyo codkeeda aan la shaacin karin ee ku jira daaqadaha, laakiin ...
Boggii hore Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 page Next